Nanafintohina ny espaniola ny sazy kely nomena ny “La Manada” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2018 4:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Ελληνικά, Italiano, русский, 繁體中文, Deutsch, Español
Andian-dehilahy (La manada), tamin'ny fety San Fermín taona 2016. Sary avy amin'i Cuarto Poder, licence CC BY-NC 3.0
[Mankany amin'ny teny Espaniola avokoa ny rohy rehetra ao anatin'ny lahatsoratra, raha tsy misy ny fanovana]
Nanambara vao haingana ny didim-pitsarany ny Fitsarana ara-paritra ao Navarre tamin'ilay raharaha “La manada” (andian-dehilahy), vondrona lehilahy dimy voampanga ho niara-nanolana vehivavy iray tamin'ny volana Jolay 2016, nandritra ny Fetiben'ny San Fermín tao Pamplona. Voampanga ho nangalatra ny findain'ity vehivavy ity ihany koa izy ireo, naka sary ny fanafihana ary nizara izany tao amin'ny media sosialy, izay nitarika fiampangana fandrobàna miharo herisetra sy fanitsakitsahana fiainana manokana.
Voasazy higadra sivy taona an-tranomaizina sy dimy taona araha-maso izy dimy lahy. Tsy maintsy miara-mandoa onitra 50.000 Euros (60.400 dolara Amerikana) ho an'ny niharam-boina ihany koa izy ireo. Voampanga ho nanao herisetra ara-nofo fa tsy fanolanana ry zareo. Sokajiana ho tsy dia zava-dehibe loatra ny herisetra ara-nofo ary kely ny sazy. Nitaky 22 taona an-tranomaizina ho an'ny tsirairay ny mpampanoa lalàna, ahitana mpikambana iray ao amin'ny tafika sy mpiambina iray ao amin'ny mpiambina sivily ao amin-dry zareo. Nitaky 26 taona an-tranomaizina kosa ny Vaomieran'i Pamplona sy ny Governemantam-paritra ao Navarra.
Niteraka hetsi-panoherana goavana tany Espaina ny fitsarana ny “La manada”, nahitana ny fihetsiketsehan'ireo olona arivony miaraka amin'ny teny filamatra “Ranabavy, matoky anao aho.” Nahangona olona an-jatony teo anoloan'ny Fitsarana Ara-paritra ao Navarra ihany koa ny famoahana ny didim-pitsarana, izay niteraka fihetsiketsehana avy hatrany taorian'ny nanambarana ny sazy.
Miampita sisintany ny didim-pitsarana “La Manada”: mitantara ny fahatezerana ny gazety iraisam-pirenena
Maneho hevitra miaraka amin'ny sary namboarin'izy ireo amin'ny didim-pitsarana La Manada ireo mpanakanto Espaniola miisa 15
Ry namana malala, vakio tsara ity ary mandraisa anjara amin'ny hetsi-panoherana. Nahatratra ny vehivavy rehetra izany ary tsy tokony atao tahaka izany ny vehivavy. Ampy izay. Hitako fa mpanambany vehivavy tahaka ny fihetsiky ny La Manada ny sazy navoakan'ny mpitsara. Ratsy fitondran-tena, tsy azo ekena, mahamenatra. Tsy mila fandeferana na kely aza.
Niparitaka tao amin'ny tambajotra sosialy ihany koa ny hatezerana:
Fahatafintohinana amin'ny fanambaniana vehivavy: 18 taona izy; naolan'ny lehilahy 5; mamo, zokiny 10 taona sy efa nanao izany teo aloha; nanomana izany tao amin'ny Whatsapp izy ireo; nandrakitra ny zava-nitranga; naneho hevitra tao amin'ny media sosialy; manontany anao ny fitsarana; nanohitra ve ianao?; nitsara izy ireo fa tsy fanolanana izany
Maro amin'ireo izay nanohitra no tsy tafavoaka velona
Tsy maintsy misafidy ho vonoina sa hangina isika?
RANABAVY, MATOKY ANAO AHO
Mandratra antsika rehetra ny didim-pitsarana La Manada #IBelieveYou. Nahafantatra ny didim-pitsarana amin'ny raharaha heloka bevava “La Manada” i Espaina omaly. Vondrona lehilahy dimy nanolana vehivavy iray, sy naka sarimihetsika ary nizara izany. Nilaza ihany anefa ny fitsarana fa tsy fanolanana izany.
Tao amin'ny pejy Facebook “No es nada personal” (Tsy manokana izany), bilaogera Carlota M. namoaka lahatsoratra nanjary nalaza:
Lehilahy dimy eo amin'ny vavanao, ny vodinao sy ny fivavianao, indray miaraka daholo izany, vao maraina ao amin'ny fidirana ao amin'ny tranobe, mientanentana izy rehetra no sady mamerimberina hoe “anjarako izao, anjarako izao !”,mamoaka ny maloton'izy ireo ao aminao, tsy milaza na inona na inona aminao ary avela irery any amin'ny hopitaly no hiafaranao – tsy misy finday satria nangalarin'izy ireo ny finday ka tsy afaka miantso na iza na iza ianao – nokarakarain'ny polisy, dokotera sy ny psykôlôgy, tsy sokajiana ho fanolanana izany ao Espaina.
Sary vetaveta tahaka ny fampianarana firaisana ara-nofo.
Fitsarana manambany vehivavy.
Talohan'ny nahafantarana ny fahadalan'ireo dimy lahy ireo, nampitandrina ny hetsika feminista fa hanao fihetsiketsehana vaovao izy ireo raha afaka madiodio na omena sazy malefaka ireo lehilahy voampanga. Zaida Cantera, solombavambahoaka ao amin'ny Antokon'ny Mpiasa Sosialista Espaniola (PSOE) sady efa niharan'ny fanorisorenana ara-nofo tao amin'ny tafika, nanambara izao manaraka izao momba ny sazy mety hitranga:
Ho fananganana ny sainan'ny kolontsaina fahazoana manao fanolanana izany ary handravarava ny voka-dratsin'ny tsy fisaziana amin'ny fanolanana
Nambara fa meloka ireo voampanga tamin'ny didim-pitsarana efa naharitra dimy volana mahery vao navoaka. Matetika mitaredretra amin'ny fanapahan-keviny ny fitsarana misahana raharaha, noho ny raharaha marobe loatra sy ny fitandreman'ny mpitsara, izay matetika mandinika amin'ny fotoana maharitra sy amin'ny antsipirihany amin'ny fanapahan-keviny.
Tamin'ity raharaha ity, nahatara ny didim-pitsarana ny tsy fiombonan-kevitra teo amin'ireo mpitsara. Nanana hevitra tsy mitovy ny amin'ny hafa ny iray tamin'ireo mpitsara, satria mitaky ny fanafahana madiodio an'ireo voampanga. Nangataka fanafahana madiodio ho an'ireo voampanga ny mpisolovava, ary nanambara ny fikasan'izy ireo hampiakatra ny didim-pitsarana ireo voampanga.
Mandritra izany, mitohy ny fihetsiketsehana manohitra ny didim-pitsarana
Fihetsiketsehana vaovao manohitra ny didim-pitsarana manafaka ny fanolanana amin'ny raharaha “La Manada”
Nohavaozina ity lahatsoratra ity tamin'ny 2 mey 2018 tamin'ny 15:05 ora Madagasikara. Ny voatra teo aloha tamin'ity tantara ity dia nametraka tamim-pahadisoana fa nomelohina ho nanao herisetra ara-nofo ilay vondron'olona fantatra anarana amin'ny hoe “la manada” ary nolazaina fa niharam-boina tamin'ity raharaha ity ihany koa i Zaida Cantera.